दैनिक १८ देखि २० रोटी खाने यी १६ वर्षीय किशोरमा देखिएको समस्याले डाक्टर पनि चकित ! « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं । केही समय अगाडि, दीपिका पादुकोण र अमिताभ बच्चनको फिल्म ‘पीकू’ प्रदर्शनमा आयो । यसमा अमिताभको चरित्र दिशा नहुने समस्याले चिन्तित भएको व्यक्तिका रुपमा थियो । त्यो चलचित्रमा देखाइएको कुरा हो तर के वास्तविक जीवनमा यो कुरा लागु हुन्छ ? तर यो कुनै कल्पना होइन, तर एक जवान व्यक्तिको वास्तविकता हो ।
एक १६ वर्षीय किशोरलाई अनौंठो रोग लागेको छ। उनी गत १८ महिनादेखि शौचालय गएका छैनन् । रोचक कुरा के भने उनी दिनमा १८ देखि २० वटासम्म रोटी खान्छन् । अहिले उनलाई कुनै प्रकारको समस्या देखिएको छैन । तर उनको परिवार चिन्तित छ कि छोरा कुनै ठूलो रोगको फन्दामा परेको त भएको छैन ।
मुरैनामा, एक गरीब परिवारको छोरा एक धेरै गम्भीर बिरामीको सामना गरिरहेको छ । डाक्टरहरु पनि अनुसन्धान गर्न सकिरहेका छैनन् । मनोज चण्डिलका १६ वर्षीय छोरा, आशीष चण्डिल, सबिजित, मुरैना, गत १८ महिनादेखि शौचालय गएका छैनन् ।
यस रोगको बारेमा जानकारी पाउने बित्तिकै आफन्तहरूले मुरैना भिण्ड ग्वालियरका धेरै चिकित्सकहरूलाई देखाए । रोग पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरिएको थियो, तर हालसम्म यस रोगको कुनै पहिचान गरिएको छैन ।
आशिष हरेक दिन खानामा १८ देखि २० रोटी खान्छन्, तर उसको पेट र शरीरमा कुनै समस्या छैन । उनी सामान्य अवस्थामा आफ्नो जीवन बिताइरहेको छन् । परिवार चिन्तित छ कि उनीहरूको छोरा कुनै ठूलो रोगबाट ग्रस्त भएको हुनसक्ने डरका कारण चिन्तामा परेको छ ।
यस सन्दर्भमा, बाल रोग विशेषज्ञहरूले यस रोगको बारेमा जान्नको लागि ठूलो अनुसन्धानको बारेमा कुरा गरिरहेका छन् । डाक्टरहरूले अनुसन्धान बिना कुनै पनि सम्भावना व्यक्त गर्न उचित ठान्दैनन् । शौचालय नभए मानिस बाँच्नै सक्दैन ।
तर उनी १८ महिनादेखि बाँचिरहेका छन् । यो के भइरहेको छ । कहाँ गइरहेको छ । यति धेरै भोक उनीमा किन जागिरहेको छ ? किन यति धेरै खान सक्छन् । डाक्टरहरुमा समेत प्रश्न नै प्रश्न छ तर यसको उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन । News Source
पिडित महिलाको बयान : एक्लै सुतिरहेको थिए अचानक तिन जना युवकहरु घर भित्र छिरेर मलाई ……